यस्तो हुनेछ भबिष्यको हाइटेक घर र तपाईको जिन्दगी :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
यस्तो हुनेछ भबिष्यको हाइटेक घर र तपाईको जिन्दगी जुन रफ्तारले प्रविधिको विकास भइरहेको छ, त्यसले मानिसको रहनसहनमा पनि परिर्वतन ल्याएको छ । कम्प्युटर क्षेत्रको नामी कम्पनी माइक्रोसफ्टले ‘स्पेस अफ दि फ्युचर’ नामको नयाँ मोडल ल्याएको छ । जसमा अबको ५ वा १० वर्षपछिको हाइटेक जीन्दगी कस्तो हुन्छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
माइक्रोसफ्टको यो महत्वपूर्ण प्रोजेक्टसँग जोडिएका एन्टन एड्र्यूजका अनुसार उक्त घरमा रहेको विशेष डेस्क आवश्यकता अनुसार तलमाथि गर्न सकिन्छ । जसमा तपाई आरामसँग काम गर्न सक्नुहुनेछ, अनि हेर्दा हेर्दै फुलेर कम्प्युटर स्क्रीनका रुपमा अगाडी आउँछ । यो स्क्रीनले मानिसको अनुहार चिनेर उसका सम्वन्धित बस्तुहरु स्क्रीनमा प्रस्तुत गर्छ । त्यस्तै यसमा रहेक सूचनामा एक कमाण्ड हुन्छ जसले एक अर्कासँग जोडिएको सूचनादेखि सर्चसम्मको सुविधा दिन्छ । सर्चमा जाँदा सम्वन्धित भिडियो, तस्वीर र अन्य जानकारीसमेत पाइन्छ । सुरुमा सेतो वा कालो बोर्ड हुनेछ, जसमा तपाई लेख्न सक्नु हुनेछ । त्यसपछि टच स्क्रीन भएको प्यानल आउँछ, जसमा तपाई सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ, एउटै स्त्रिmनमा यी मल्टिपल काम सहजै हुनेछन् ।
भविश्यमा यस्तो सामाग्रीमा थुप्रै प्रकारको कमाण्ड निहिन हुनेछ । जसमा तपाईलाई यस सामाग्रीको पछिल्लो अवस्था देखाइनेछ भने केही कमाण्ड उक्त सामाग्रीलाई सर्चको माध्यमबाट अपडेठ पनि गराउँछ ।
सायद यही नयाँ चीजको खोजीको एउटा परिणाम होला-भबिष्यको हाइटेक घरको कन्सेप्ट ।’ यसले माइक्रोसफ्टको शाख उठाउन पनि मद्दत गर्ने बीबीसीले अनुमान गरेको छ । 11 Comments on “यस्तो हुनेछ भबिष्यको हाइटेक घर र तपाईको जिन्दगी”
Chheku wrote on5March, 2013, 14:09
wow dami lagyo
LAKHARTHYAK wrote on5March, 2013, 15:52
HOINA HOLA ?
Like or Dislike: 1 1[जवाफ फर्काउनुहोस्]sudhamsu Reply: March 6th, 2013 at 6:22 amhola
श्रीनिवास पंडित wrote on6March, 2013, 3:57
उपभोक्तावादको अंत छैन. यो चरम
उपभोक्तावाद मानवताको विनासको
कारण बन्ने छ.
Like or Dislike: 8 2[जवाफ फर्काउनुहोस्]Abhi Reply: March 7th, 2013 at 2:31 pmpandit baje mantra japdai basdai gara na ta
Kul wrote on6March, 2013, 5:42
माइक्रोसफ्टले ५-१० बर्षमा हाइटेक घर बनाउन कस्सिएको छ भने हामी पनि तेतीनै समय हाइटेक घर चलाउन बिजुली निकाल्नमा कस्सिने हो कि
Well-loved. Like or Dislike: 26 1[जवाफ फर्काउनुहोस्]jaideep koyu Reply: March 7th, 2013 at 3:55 pmgre8 idea !
yatri wrote on6March, 2013, 6:28
तर नेपालमा मा पनी ।।।।।
suman giri panauti wrote on6March, 2013, 6:45
k garnu ho… hami nepaliharulai aakasko phal aankha tari mar ta ho ni hoina vane tapaiharunai vannus kyare
bipin magar wrote on6March, 2013, 17:45
खाने कुरा किनेर ल्याउनु पर्यो, बिजुली को बिल पानीको बिल कोले तिर्ने होर?फिरिमा भए त एस्तो घर बनाउनु हुन्थ्यो
bantha babu rukum wrote on7March, 2013, 1:23
yo parbidiko bazzzar cost kati holabhanne kura ko cintalag yo